Amava eMariner Absolute Beachfront
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMaree
UMaree ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
IMariner ijonge kuLwandle lweTasman kwindlwana eselunxwemeni yaseFalmouth, malunga nesiqingatha sendlela phakathi kweBay of Fires kunye neFreycinet Peninsula. Vuka kwisandi samaza elunxwemeni ngaphandle kwefestile yakho kwaye uthathe uxolo kunye nokuhlaziyeka kolwandle.
Yiba nomfanekiso-ngqondweni umi kumgangatho womgangatho, umoya wolwandle ubethwa ngumoya ezinweleni zakho namaza eqengqeleka ngezantsi. Ukondela kumanzi alatyuzayo, iintaka zolwandle zijikeleza phezulu, nokukhanya ngaphaya kokukhanya. Yonke imvakalelo yolwandle - umoya wetyuwa, isandi samaza, ulwandle olukhulu oluluhlaza.
Ngaphandle kokuba oku akusiyo umgangatho wenqanawa; kunoko, ummandla wolwandle ophefumlelweyo waseScandinavia omiswe kunxweme olusempuma lweTasmania. Dibana noMatiloshe.
Iilwandle ezinesanti zokuthatha idiphu okanye ukusefa kukuhambo olufutshane ukusuka endlwini, yona ngokwayo emi kunxweme lolwandle olunamatye. Yiza nezixhobo zakho zokuloba, ubambe incwadi elungileyo okanye ujonge iilwandle ezifihliweyo kunye neendawo zokuhlala zaseFalmouth. Kwaye ukuba uziva unomdla ngakumbi, zonke izinto ezimangalisayo zonxweme olusempuma lweTasmania zikumgama olula wokuqhuba.
** Unikezelo oluKhethekileyo: Yonwabela ukwamkelwa ngokukhululekileyo ngebhotile epholileyo epholileyo yewayini yaseTasmanian ehlwahlwazayo ukuze uyonwabele ukufika kwakho **
I-Mariner ikulungele ngokufanelekileyo ukuhlala kwabantu abadala, kwaye ngenxa yoko sinikezela ngendawo yokuhlala yabantu abadala kuphela.
Inombolo yomthetho: DA 066-18